Ciidamada Itoobiya oo Ka Baxay Degmada Ceelgaras iyo Deegaanka Ceelahale,Al Shabaab oo Dib Uqabsaday.
Wednesday January 07, 2015 - 21:58:43 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Galguduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada Xabashida Itoobiya ay maanta gelinkii dambe isaga baxeen degmada Ceelgaras iyo deegaan hoos yimaad.
Kumanaan katirsan ciidamada Itoobiya oo wata gaadiidka gaashaaman iyo kuwa xamuulka ayaa si buuxda u faarujiyay degmada Ceelgaras oo qiyaastii 45 KM ujirta magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanka Ceel-lahele.
Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ka hor intii aysan ka bixin Ceelgaras ay gubeen oo ay dab qabadsiiyeen dhowr guri iyo dhammaan teendhooyinkii iyo difaacyadii ay ku lahaayeen magaalada.
Boqolaal katirsan ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo bilihii lasoo dhaafay kaabiga ku hayay magaalada ayaa dib ula wareegay Ceelgaras iyo Ceelahele.
Saraakiil katirsan xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa durbadiiba gaaray Ceelgaras iyagoona sheegay in ay qiimeynayaan xaaladda deegaanadii cadawgu faarujiyeen.
Ciidamada Itoobiya ee isaga cararay Ceelgaras iyo Ceelahele ka baxay ayaa go’doomin adag iyo weeraro kala kulmayay ciidamada muslimiinta waxaana xusid mudan in beesha Maxamuud Hiraab ay qeyb weyn ku laheyd dagaalkii Xabashida looga xureeyay dhul ballaaran oo Galguduud katirsan.
Horay ayay ciidanka gumeysiga Itoobiya uga baxeen degmada Wabxo degmada Ceelbuur ayaa ah meesha kaliya oo ay wali uga suganyihiin dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee Bariga Galguduud dhaca balse magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb ayay Itoobiyaanku ka dhigteen saldhigyo ay Bariga gobolka uga duulaan.